Faysal Cali Waraabe oo ka digay "maamul goboleed ay DF dhiseyso"
Hogaamiyaha xisbiga UCID ayaa wuxuu sharaxaad ka bixiyey qorshaha ay waddo Villa Soomaaliya.
HARGEYSA, Somaliland – Faysal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID, ayaa wuxuu ka digay "maamul goboleed ay dowladda Soomaaliya ka dhiseyso goboladda Sool, Ceyn iyo Sanaag".
Waraabe oo qaybo kamid ah warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in Villa Soomaaliya u kaashaneyso qorshahaas Cabdixakiim Dhooba Daareed, afhayeenkii hore ee golaha wakiiladda dowladda Puntland.
Sidda laga soo xigtay Faysal, wada hadalo looga tashanayo hirgelinta qorshahaas ayaa ka socda Addis Ababa, caasimadda Itoobiya. Wada xaajoodyadda waxaa qayb ka ah Fahad Yaasiin, taliyaha NISA.
"Ma aqbali doono maamul goboleedkaas laga dhisayo bariga Somaliland," ayuu yiri Faysal oo la hadlayay warbaahinta maanta oo Sabti ah. "Talaabadan waa mid lagu jarjarayo Somaliland," ayuu ku daray.
Goboladda Sool, Ceyn iyo Sanaag ayaa waxaa muddo badan ku muransan Puntland iyo Somaliland oo maamulo kala duwan ay u joogaan.
Dhooba Daareed ayaa todobaadkii hore socdaal ugu ambabaxay magaaladda Addis Ababa, ee xarunta dalka Itoobiya, iyadoo aan la shaacin ujeedka safarkiisa.
Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar [Cameey], safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Itoobiya ayaa soo dhaweeyay Dhooba Daareed oo xilka gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ku waayey mooshin laga keenay.
Qodobadda ku xusnaa soo jeedinta oo ay saxiixeen mudaneyaal badan ayaa waxaa kamid ahaa; ku tamasho sharci, dastuur, xeer-hoosaadka golaha iyo in uu xarunta baarlamaanka u daabulay maleyshiyo beeleed.
Somaliland ayaa qoraal ay soo saartey shalay ku sheegtay in Shirka Brussels uu yahay mid...
Somaliland 18.05.2019. 01:51